Farmaajo oo maanta xariga ka jaray Xarunta laga maamulayo Hawada Somalia (Daawo Sawirada) – Xeernews24
28. Dezember 2017 /in WARAR/NEWS /von admin
Madaxweynaha dowlada Federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa maanta si rasmi ah xadhiga uga jaray Xarunta laga maamulayo Hawada Soomaaliya oo 27-sano kadib Muqdisho loo soo wareejiyay.
Munaasabad balaadhan oo xaruntan cusub xadhiga looga jarayay ayaa maanta ka dhacay Xarunta Hey’adda Duulista iyo saadaasha hawada Soomaaliya oo kutaala Garoonka Aadan Cadde, waxaana munaasabadan ka qeyb galay Madaxweynaha iyo masuuliyiin kala duwan.
Madaxweyne Farmaajo ayaa sidoo kale kormeer ku sameeyay halka ay yaalaan qalabka loogu tala galay in lagu hago hawada Soomaaliya, waxa uuna Madaxweynaha indhihiisa ku arkay qalab casri ah oo loogu tala galay hagida hawada Soomaaliya.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa tijaabo ku sameeyay qalabkan lagu hagayo hawada Soomaaliya, waxa uuna Madxaweynaha qalabkan kala hadlay diyaarado hawada Soomaaliya xiligaasi ku jiray.
Soomaaliya ayaa 27-sano kadib ku guuleesatay in ay dib ula soo wareegto maamulida hawadeeda oo horey looga maamuli jiray dalka Kenya, waxa ayna tilaabadan umada Soomaaliyeed iyo dowladaba u tahay guul weyn.
Qarax Xeelad cusub loo adeegsaday oo Ciidanka Jabuuti ee AMISOM lagaga dilay... Masuuliyiin booqatay guriga Senator Cabdi Qeybdiid, soona arkay dhibaatadii...